VaTsvangirai Vogadzwa seNhengo yeDare reHouse of Assembly
Kurume 03, 2009
Mutungamiri wehurumende, VaMorgan Tsvangirai, pamwe nemumwe wevatevedzeri vavo, Professor Arthur Mutambara, neChipiri vakagadzwa kuve nhengo dzeparamende nemunyori weparamende, VaAustin Zvoma.
Mutori wenhau weStudio7, Irwin Chifera, uyo ange ari pakugadzwa kwemutungamiri wehurumende anoti kutora mhiko kwaVaTsvangirai kunoreva kuti vanenge vave kutungamira basa rese rehurumende mudare reHouse of Assembly.
Vamwewo vakagadzwa kuve nhengo dzedare iri vasina nzvimbo yavanomirira kana kuti non-constituency MP, igurukota rinoshandira mumahofisi aVaTsvangirai, VaGorden Moyo, pamwe nemuchuchisi mukuru wehurumende, VaJohannes Tomana.
VaTomana vakasveveredzwa nenhengo dzeMDC apo vakagadzwa sezvo vari kuonekwa nebato iri saivo vari kuda kuvhiringa hurumende yemubatanidzwa nekuramba kuburitsa mujere vanhu vakasungirwa zvematongerwo enyika.
Pasi bumbiro remitemo yenyika, gweta guru rehurumende rinosungirwa kuve nhengo yeparamende pamwe nekuvewo nhengo yedare remakurukota ehurumende.
Mamwe makurukota asina nzvimbo dzaanomirira, akaita saVaGibson Sibanda naVaJohn Nkomo, anonzi achagadzwawo kuva nhengo dzedare reseneti apo richatanga kugara mumasvondo maviri anotevera.
Nyanzvi munyaya dzemitemo, uye vari sachigaro veNCA, Doctor Lovemore Madhuku, vaudza Blessing Zulu weStudio7 kuti kutora mhiko kwaVaTsvangirai hakuna zvakunobatsira asi kuti kungozadzisa chirevo chehurumende yemubatanidzwa.